OTU ESI AKWỤ ỤGWỌ MAKA ỊZỤTA SITE NA QIWI WALLET - QIWI - 2019
Anyị na-akwụ ụgwọ maka ịzụrụ site na akpa ego QIWI
Tupu ịmalite ịkpọ ụbọ ahụ, ị ​​ga-edozi ya, ma ọ bụghị, n'ihi ụda nke ụda nke ngwá ọrụ ahụ na-eme, ihe egwuri egwu ga-abụ ihe na-ezighi ezi na, dika ha na-ekwu, bepụ ntị. Ihe ngwanrọ kachasị mma maka ịkụ aka guitar na bass bụ Moose Land Guitar Tuner.
Ịtọ ụbọ akwara
Isi ọrụ nke ụda olu a bụ ịkpọ ụda egwu site na iji igwe. A na-eme nke a n'otu ụzọ ahụ dị ka ọtụtụ ngwọta dị iche na ngwá ọrụ pụrụ iche. Ihe omume ahụ na-atụle ụda a na-enweta site na igwe okwu, ma jiri ya dee ya. Mgbe nke ahụ gasịrị, ihuenyo na-egosiputa ogo nke ọdịiche nke ụda a na-edegharị site na ngwa ahụ.
Ịgbanye ụda nke ntị
Na mgbakwunye na usoro egwu egwu a kọwara n'elu, ngwaahịa a nwere ike ime ya site na ntị. Ihe kachasị mkpa nke usoro a bụ na usoro ahụ na-agwakọta ụda nke yiri nke ahụ na pitch na ederede ma ọ bụ nke ọzọ, mgbe nke ahụ onye ọrụ ga-adọrọ ụda nke ụda ahụ ka ụda ha na-eme yiri nke mmemme ahụ.
Ihe nkesa nkesa;
Nkwado asụsụ Russian.
Ọ bụghị onye ọ bụla, ma ọ bụghị mgbe niile nwere ngwá ọrụ pụrụ iche iji gụgharịa guitar. N'okwu ndị dị otú ahụ, ọ bụ ihe ezi uche dị na iji ngwanrọ dị ka Guitar Tuner si Moose Land. Ngwaọrụ a ga - enyere gị aka guitar guitar gị ngwa ngwa gaa na njirimara mara ma aka na iji igwe.
Download Mooseland Guitar Tuner maka n'efu
Guitar tuning Software Easy guitar tuner Guitar Tuner PitchPerfect Tune ya!
MuzLand Guitar Tuner bụ software n'efu site na ndị mmepe nke Russian, nke na-enye gị ohere ịmegharị guitar egwu ahụ na bass n'ụdị azu.
Onye Mmepụta: Muzland.ru